कृष्ण खनाल अहिलेको राजनीति र चुनावको विकृति देख्दा मलाई बीपी कोइरालाले ४२वर्षअघि भनेको झलझली सम्झना भइरहेछ । जनमतसंग्रहपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुँदै थियो । चुनावमा लोभ्याउने केही सकारात्मक कुराहरू पनि थिए, बालिग मताधिकार, राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी सरकार आदि । चुनाव लड्ने कि नलड्ने भनेर नेपाली कांग्रेसमा द्वन्द्व थियो । नेताहरू देशका विभिन्न भागमा कार्यकर्ता भेला गरेर परामर्श गर्दै थिए । भेलामा सम्बोधन, छलफलका अतिरिक्त बीपी बौद्धिक अन्तरक्रिया पनि गर्थे । धनगढीमा कैलाली बारले आयोजना गरेको एउटा गोष्ठीमा चुनावमा भाग लिनु मात्र प्रमुख कुरा होइन, त्यसमा पार्टीको आदर्श, सिद्धा
लेखनाथ पाण्डे नेपालमा विनापत्रकारिताका पत्रकारको बिगबिगी नै छ । पत्रकार महासंघमा आबद्ध १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारमध्ये अधिकांशको कर्म र मूल आयस्रोत पत्रकारिता नभएको भनाइ वेलाबखत महासंघका पदाधिकारीबाटै सुन्न पाइन्छ । पत्रकारिता पेसाप्रति सबैभन्दा चुनौती तिनैबाट देखिन्छ, जो ‘पत्रकार’ भनिन्छन्, तर पत्रकारिता गर्दैनन् । ठूला मूलधारका र संस्थागत रूपमा अघि बढेका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीको मूल प्रवृत्ति यो देखिन्न । तर, विनापत्रकारिताका पत्रकारले तिनका भूमिका र योगदानलाई पनि ओझेल पार्दै छन् । पत्रकारितालाई देखाउने दाँत बनाएर राजनीति, दलाली र सौदाबाजी गर्नेहर
काठमाडौं, १४ असार। नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गरेको छ । काठमाडौं आज एक कार्यक्रमको अयाोजना गरेर गौतमले आफ्नै संयोजकत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामद दल घोषणा गरेको हो। दलको संयोजकमा स्वयम् वामदेव गौतम छन्, भने सचिवमा डीबी कार्की रहेको छ। गौतमको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान दलमा समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी र निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका आम नेपाली पार्टी र स्वतन्त्र वामपन्थी समूह पनि एकीकरण भएका छन्। घोषित नयाँ पार्टीमा वामदेव आफैं संयोजक छन् भने, डीबी कार्कीलाई सचिव तोकेका छन्। सचिवाल
रश्मि आचार्य सन् १९९० मा सोभियत रूसको समाजवादी सत्ता ढलेपछि विश्वबाट कम्युनिस्ट विचार समाप्त भयो भनेर पुँजीवादीहरूले हल्ला पिटिरहे। सोही समयमा नेपालका कम्युनिस्टहरू भने मदन भण्डारीको अगुवाइमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गर्न तल्लीन थिए। देशमा भर्खरभर्खर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो। जुन व्यवस्था स्थापनामा वामपन्थी र कांग्रेसबीच सहकार्य भएको वास्तविकता आलै थियो। यही पृष्ठभूमिमा संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, मानवअधिकारको रक्षा, बहुलवादी खुल्ला समाज, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षजस्ता विशेषता समावेश गरेर तत्काली
रुपक सापकोटा विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसमा मूलतः अमेरिकाको चीनसँग बढ्दो प्रतिस्पर्धा र त्यो प्रतिस्पर्धा क्रमशः प्रतिद्वन्द्वमा विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा थप जटिलताहरू बढ्ने संकेत देखिएका छन् । निकटतम छिमेकीहरू, चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रधानता एवं उनीहरूबीचको कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ रहँदै आएको छ । यद्यपि, मूलतः इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको कार्यान्वयन र उक्त रणनीतिको साझेदार बन्नका लागि नेपाललाई अमेरिकाले आमन्त्रण गरेपश्चात् नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति देखिने गरी व्यापक हुँदै गइरहेको छ । तर नेपालमा अमेरिकाको
सञ्जीव कार्की फेनिजमको सुरुवात अठारौँ शताब्दीमा अमेरिका र युरोपबाट सुरु भएको हो । नारीवादले वैचारिक आन्दोलनको स्वरूप सन् १९६० देखि लियो । सन् १९२० मा बेलायत र अमेरिकामा महिलाले मतदानको अधिकार प्राप्त गरे । अमेरिका र युरोपमा नारीवादी आन्दोलनको लहर चलेको बेला नेपाल राणा शासनको उत्कर्ष खेप्दै थियो । त्यही बेला भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा वि.सं. १९७४ मा सती प्रथा, बालविवाहजस्ता सामाजिक कुरीतिविरुद्ध अभियान चलाएर आफ्नो माग पूरा नगरेका कारण योगमायासहित ६८ जना महिलाले अरुण नदीमा जल समाधि लिएका थिए । यो घटनाको तीन वर्षपछि नेपालमा वि.सं. १९७७
युवराज अधिकारी विकसित, विकासोन्मुख तथा विकासशील राष्ट्रका लागि पर्याप्त रोजगारी र आवश्यकताअनुसार रोजगार सिर्जना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँंगै रोजगारीको अवसरहरू खुम्चने भएकाले बेरोजगारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । विकसित, विकासोन्मुख तथा विकासशील राष्ट्रका लागि पर्याप्त रोजगारी र आवश्यकताअनुसार रोजगार सिर्जना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँंगै रोजगारीको अवसरहरू खुम्चने भएकाले बेरोजगारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । बेरोजगार समस्या बढ्नुमा विपन्न राष्ट्रहरूको आर्थिक सूचकाङकहरू सुधार नहुने र विकसित द
सोमत घिमिरे स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिएपछि कसले हार्‍यो, कसले जित्यो; धरान, काठमाडौं र धनगढीमा किन स्वतन्त्रले जिते; राजनीतिक दलहरूभित्र केकस्ता अन्तर्घात भए; गठबन्धन कति प्रभावकारी भयोजस्ता प्रश्नहरूको वरिपरि बहस केन्द्रित छ । साँच्चै संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म के हो, विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले के गर्न सक्यो र के गर्न सकेन, अब पाँच वर्ष गर्नुपर्ने के होजस्ता प्रश्नहरू छेउ लगाइएका छन् । जे बहस गर्नुपर्दैनथ्यो, बहस त्यसमा केन्द्रित छ; मुख्य विषयमा बहस छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही नै हो । लोकतन्त्र केवल कानुनी कुरा होइन, केवल सिंहदरबारको मामिला मा
मान्छेसँग खुसी छैन चुरे
चन्द्रकिशोर जबसम्म चुरे आम्दानी गर्ने स्रोत मात्र हो भन्ने भावना रहन्छ तबसम्म यसको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान जाने देखिँदैन । चुरे सबैलाई चाहिन्छ । माथि महाभारत क्षेत्रका बासिन्दालाई चाहिन्छ, तल समतलकालाई चाहिन्छ । चुरे तराई र महाभारतको सन्धि–क्षेत्र हो । अधिकांश ठाउँमा दक्षिणी समतल सकिएर उठेको पहिलो पहाड चुरे हो । महाभारतमुनिको पहाडका रूपमा चुरे छ, जसको सबैलाई आवश्यकता छ । तर पनि चुरेमाथि विनाशलीला रोकिएको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ को व्यावहारिक उपयोगिता रहेन, अहिले त ‘चुरे नै धन’ भएको छ । छोटो बाटो र समयमा अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभि
गत महिना सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल नकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थितिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । पोखरा र हेटाँैडाजस्ता प्रमुख पालिकामा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई पनि सराहनीय मान्नुपर्छ । साढे चार वर्षदेखि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी र तिनका सहयोगी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यस चुनावमा ठूलो पराजय भोग्न